VLC ma ciyaari files MP4? Xaaladaha intooda badan, waxa aanu. Laakiin mararka qaarkood, waxaad iman karo guud ahaan dhibaato noocan oo kale ah qodxan sida nin hoos ku qoran:
"Waxaan video MP4 ah oo aan la Windows Media Player ciyaari karaa, laakiin VLC ma ciyaari karo. Waxaan isku dayay dib-u-rakibidda dambeeyay VLC laakiin nasiib jirin."
User -Wararka ka videohelp.com
MP4 waa qaab weel multimedia ah. Files MP4 kala duwan yihiin encoded la kala duwan video codecs. Haddii file MP4 ma aha file a MP4 "been abuur" ama musuqmaasuq, oo laga yaabo in dhibaato video codec ah. Waxaad isku dayi kartaa ciyaaryahan kale oo warbaahinta u ciyaaro files MP4 aad. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad waxaa loo isticmaalaa in ciyaaryahan warbaahinta VLC, si aad u VLC qaab si buuxda u taageeray u siman loo maqli karo badalo MP4.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa gargaar aad u weyn. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loogu badalo MP4 in ku dhow wax qaabab ouput audio iyo video oo caan ah, xataa qalabka. Oo weliba, waxay kuu ogolaanaysaa inaad qabsato qaar ka mid ah koobin video muhiim ah sida video encoder, xallinta, heerka yara iyo heerka jir. Maqaalka halkan inta badan ku tusi doona sida ay u xaliyaan incompatibility MP4 ee si faahfaahsan, si aad u ciyaari karaa MP4 on VLC iyadoo wax dhibaato ah.
1 Import files MP4 in MP4 si Converter VLC
Orod app this, iyo riix badhanka in menu ugu weyn. Markaas, waxaad dooran kartaa files MP4 ka your computer inay dajiyaan in barnaamijkan. Ama, si toos ah u heli files MP4 aad rabto in aad kombiyuutarka, oo markaas iyaga dajiyaan in ay leeg- tahay tan app ee drap-iyo-dhibic.
Fiiro Gaar ah: Waxaa jira waddo file hoose ee suuqa kala this. Haddii u baahan tahay, waxaad riixi kartaa "..." badhanka si ay dib-u-dhigay folder wax soo saarka. Ama files gediyay lagu kaydin doonaa folder caadiga ah.
2 Dooro VLC ah oo ay taageerayaan qaab
Kaliya dooro qaab ay taageerayaan qaab wax soo saarka ay VLC. Si aad u samayn, kaliya aad ku dhacay icon qaab image ku Murayaad Qaabka Output, ka dibna tag "Qaabka" category inaad doorato qaabka aad rabto, sida wmv.
App Tani waxay sidoo kale ku siinaysaa awood u leh inay qarka u saaran video encoder, xallinta, heerka yara iyo heerka jir. Haddii aad rabto in aad beddesho kuwaas video koobin, kaliya ku dhacay qaab doorasho marsho ugu hooseysa ee ay leeg- Qaabka wax soo saarka.
3 Beddelaan MP4 in VLC
Just bilaabi MP4 in VLC video diinta garaacida "Beddelaan" ikhtiyaarka rukun ee hoose-saxda ah ee barnaamijka 's interface ugu weyn. App Tani shaqadan daqiiqadii ah ayaa dhameystiri doona. Ka dib markii in, wax soo saarka si ay u dajiyaan file VLC ciyaaryahan warbaahinta. Waxaad ka heli doontaa faylka VLC ciyaari karaan iyadoo wax dhibaato ah.
> Resource > MP4 > Sida loo Play MP4 in VLC